Umakhalekhukhwini - lena igajethi, ngaphandle okuyinto akunakwenzeka ukucabanga ngokuphila ezweni lanamuhla. Kodwa ingabe uyazi ukuthi uyini nomphumela empilweni yakho? It kuvela ukuthi kungaba yingozi kakhulu.
It ihlanganiswa namagciwane
Kuphephile ukusho ukuthi akekho akawuthandi amagciwane, kodwa uma nabo nje akanakuma, kufanele unake okukhethekile leli phuzu. Ocingweni yeselula ikhona ku amagciwane isilinganiso ephindwe izikhathi eziyishumi kunomuntu isihlalo yangasese, futhi uma leso asikho wince, akunakwenzeka ukuba lutho nhlobo uzokwenza uyanengwa. Ngokusho samagciwane Arizona Charles Gerba zeNyuvesi, inkinga amafoni akuyona kuphela ukuthi abantu wabayisa yonke indawo, kuhlanganise yokugezela, nokuthi sidlule amafoni abo kwabanye abantu, ukubabonisa izithombe namavidiyo, futhi ngesikhathi esifanayo ukwabelana amagciwane yabo. Kulapho usongo yangempela itholwa, njengoba abantu ngokuvamile ababuzwa ngoba kwamagciwane zabo - ababuzwayo ngoba kwamagciwane zabanye abantu.
Ifoni yakho kungalimaza impilo yakho - Nakhu esikutholile, futhi kuthiwani ngesimo kwengqondo? Ezweni lanamuhla kushintsha njalo kanye neqiniso lokuthi abantu yonke indawo bangathembela amafoni abo, eziye zaholela yokuthi angenelele ihlandla elisha - "NOMOPHOBIA". Waqale asetshenziswa 2010, lapho imiphumela izifundo zesayensi luye lwabonisa ukuthi amaphesenti angaphezu kuka amahlanu abantu abayithandi lapho ngalutho nefoni uqobo, noma uma ibhethri yefoni igcina. NOMOPHOBIA - yigama uvela inhlanganisela yesiNgisi akukho-mobile-phone kwabokufika, okuyinto uhumusha njengoba "kwabokufika ngaphandle umakhalekhukhwini." Futhi akusiwona ngenhloso, futhi iyisici yangempela. Ucwaningo luveza ukuthi abantu bethi ukucindezeleka ngenxa yokuntuleka ifoni ephathekayo ngenkathi evakashele udokotela wamazinyo noma ngosuku lomshado.
Kuthinta inkumbulo yakho
Zingaki izinombolo Wazi ngekhanda? Uma ungeyena sihluke kubantu abaningi, akunakwenzeka ukuthi kuyoba inombolo enkulu. Kuleli zwe lanamuhla abantu vele uchofoze Igama lomuntu nabo ufuna ukuxhumana, futhi ifoni wenza ukuphumula yomsebenzi, futhi kungenza ube nomthelela omubi empilweni yengqondo.
Kubangela eziningi ukucindezeleka iso
Ubuchwepheshe, kuhlanganise isihlangu, kukhona empeleni esasisesisha embulungeni yonke, kuze kube manje ayaziwa, okungase abe nomthelela omubi phambi eside lonke usuku phambi zesikrini. Nokho, ngokusho kocwaningo oluthile ngo-2015, cishe ababili kwabathathu esekhala iso ukukhathala emva isikhathi eside wachitha phambi TV. Kukhona ngisho igama esikhethekile kule umuzwa: a iso umthwalo digital, noma Computer Vision Syndrome.
Ngokusho kocwaningo ka-2014, abadala uchitha amahora angu mayelana eziyisikhombisa ngosuku kwesikrini ifoni, i-computer noma omunye igajethi. Isibalo esingaphezulu kwengxenye abantu iboshelwe nokuxhumana Smartphones ubuhlungu iso umthwalo, futhi uma zithambekele ikhanda, odinga ukukwazi mayelana nokuba khona kwamakamu isixhumanisi phakathi lezi zimpawu.
Kubangela ubuhlungu entanyeni
Uma ukuncika phambili ukubheka screen yefoni, okuyinto wena ubamba esandleni sakho, sinake isimo lapho kukhona ikhanda lakho nentamo, kanye kude kangakanani wena goba phambili kusukela isikhundla evamile komzimba. Phawula futhi voltage ukuthi ubhekana e imisipha intamo, amahlombe futhi emuva. Abantu zidalwe ukuhambisa ngale ndlela, kodwa hhayi ukuba Ungami noma uhlale kulesi sikhundla amahora ambalwa. Uma wenza kanjalo, lokho kuyoholela buhlungu eqinile futhi isikhathi eside.
isixhumanisi Engaqondakali phakathi omakhalekhukhwini kanye nomdlavuza
Umqondo wokuthi omakhalekhukhwini kungase kwandise amathuba okuthola i-nezinhlobo ezithile zomdlavuza kanye izimila ebuchosheni, likhona ngempela abantu abasemkhakheni wezesayensi isikhathi eside impela, futhi kuze kube manje akukho bufakazi esingokwesayensi salo. Tifundvo letinyenti tesikhatsi lesidze ukuthatha isikhathi esiningi, futhi imiphumela cwaningo, eyaqedwa ngo-2016, yathatha iminyaka eyisikhombisa nezinyanga sibe nohlelo lokusebenzisa imali $ 25 million, zizwakalise ukukhathazeka ukuthi kungase kube imiphumela yesikhathi eside ukusetshenziswa iselula nokuchayeka RF amandla.
It kungathinta blood pressure yakho
Ifoni yakho amasongo, kodwa isibalo akachaziwe. Noma mhlawumbe kungcono inombolo awazi. Noma kungenzeka ngisho inombolo yocingo awukaze ubiza. inhliziyo yakho imigqomo a beat? Wake wacabanga for yesibili elilodwa ukuthi lokhu kuwuphawu olubi? Kunoma ikuphi, awuwedwa. Prakthiza ebonisa ukuthi omakhalekhukhwini angaba nomthelela sina blood pressure yakho futhi bungase bandise amathuba okuba lowo uzoba ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo.
It kungaba nomthelela ekulaleni yakho
Ukulala - sekuyinto inqubo ongaqondakali, futhi kuze kube namuhla is ngaye eyaziwa akupheleli lapho. Uma unenkinga ilele, isizathu angase aqambe amanga ku iselula (okungenani ingxenye). Inani elikhulu labantu (abangamaphesenti angu-80 abaneminyaka ephakathi kwengu-18 kuya ku-24) ukulala, ebambe ifoni nobude bengalo, bese lokhu kungabangela kahle izinkinga zempilo yesikhathi eside.
It zingabangela ukucindezeleka
Umuntu ngamunye wazi umuzwa ukungakhululeki ukuthi kwenzeka uma ungeke ukwazi ukusebenzisa ifoni yakho. Nokho, omakhalekhukhwini abe nomthelela ongemuhle zempilo yengqondo ngenye indlela bangakwazi ukuhlakulela futhi sibe sibi ukucindezeleka.
Uphakamisa inombolo yokulimala umunwe
Uma uqhubeka ifoni yakho ukuze isithupha sakho ukwenza imisebenzi eyisisekelo phakathi lokubhala umbhalo, chofoza izixhumanisi kanye namakhasi rewinding, ungakwazi sizitshela ukuthi ubuhlungu obunzima. Lolu cwaningo lwathola ukuthi amaphesenti angu-amane abasebenzisi bakhononda of ubuhlungu isithupha maqondana nokusetshenziswa iselula. Cishe isigamu sabantu ukuphupha ngani, kangangokuthi babengakwazi izithupha esheshayo kakhulu futhi beshesha - ngisho kwaholela ekusungulweni umzimba ezikhethekile kuhloswe asathuthuka nje izithupha.
Kungabangela nobuhlungu indololwane
Cishe, wonke umuntu wezwa epicondylitis - isifo indololwane, okuyinto ejwayelekile abadlali ithenisi. Kodwa kuthiwani izifo isici abantu abasebenzisa iselula? Lezi zifo azixhunyiwe, kodwa labo sebenzisa iselula kuvamile cubital Umhubhe syndrome. Ubonakala lapho ingcindezi njalo ku emsipheni ulnar, okuyinto ijwayelekile kuwe, njengoba lalinjalo pinching wakhe kubangela umuzwa ongavamile kakhulu esandleni sakhe, uma elbowing. kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane kuba uma uqala ukuzizwa Ukushoshozela ongaziwa esandleni sakhe, futhi ngokunembile engxenyeni esemgwaqweni ngezansi endololwaneni, futhi eduze umunwe kancane. Lesi sifo lihlotshaniswa ukusetshenziswa kwamafoni aphathekayo, kodwa kukhona izinto eziningana kungabangela. Ngokwesibonelo, ukuma lapho ulala. Ngaphezu kwalokho, abanye abantu kungenzeka izakhi zofuzo beyizidlova ukuvela kwalesi sifo. Abanye abantu kule ndawo ine imisipha ngaphezulu, okuyinto kwakha "Umhubhe" ezincane eziningi, ngaleyo ndlela kwande amathuba asathuthuka lesi sifo.
Esikhundleni sengilazi ku-iPhone ngeti-5 kuya nomzimba ngezandla zakhe
Iphone pink: yini entsha, incazelo imodeli
Bernhard Hennen: Biography nemisebenzi
Maykl Mendo: Ama-Movie kanye ne-Biography
"Stalker: Shadow of eChernobyl": ukudlula omunye best games of production ezifuywayo